Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြီးယား ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Michael Linhart ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၄းဝဝ နာရီတွင် နပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်က
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြီးယား ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Michael Linhart ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၄းဝဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် သြစတြီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုု်င်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အလားအလာများ၊ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များနှင့် ASEAN University Network မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် အခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။